Nofidian’ny Filànkevitra Aostraliana Ao An-Toerana Ny Fandravàna Ny Klioban’ny ‘Lawn Bowl’ Na Nisy Aza Ny Fanentanana Niely Be · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Desambra 2017 2:03 GMT
‘Tsia ho ana'ny kianjabe’ – Sary natolotry ny pejy Facebook-n'ny ‘Residents Against the Stadium’ (Mponina manohitra ny fanorenana kianjabe)
Very ny ezaka nataon'ny kliobanà ‘bowling’ tany Melbourne mba hanavotana ny foibeny efa 60 taona. Na teo aza ny fanentanana niarahana nanao tamin'ny haino aman-jery sosialy, dia lanin'ny filànkevitr'i Stonnington tamin'ny 6 – 3 ny fanoloana ny Klioban'ny Chadstone Bowls ho filalaovana ‘netball’ sy kianja filalaovana ‘basketball’ anaty trano.
Amin'ny Lawn Bowl (Bolina akorisa ambany), ny tanjona dia manakodiadia bolina ka izay manakaiky indrindra ilay baolina kely mavo na fotsy. Ambony bozaka na erana voatrolombelona no ilalaovina azy, ireo toerana filalaovana roa ireo dia, na an-kalamanjàna, na anaty trano. Misy klioba 1900 eo ho eo ny fikambanan'ny Bolina Aostraliana, ahitàna mpilalao maherin'ny 600.000.
Amin'ny ankapobeny, ny ‘netball’ dia lalaovina any amin'ireo firenena mampiasa manontolo na amin'ny ampahany ny fiteny anglisy britanika. Basketball-n'ny vehivavy no anarany taloha. Io no fanatanjahantena iombonana laharana voalohany ho an'ny vehivavy sy ny ankizivavy any Aostralia.
Nisy fanambaràna an-gazety nataon'ny filànkevitr'i Stonnington nanazàva ny antony sasantsasany :
Ilaina ny fotodrafitrasa vaovao anaty trano aty Stonnington ho an'ny netball sy ny basketball, fanatanjahanatena tena ankafizin'ny vehivavy. Mendrika ny fotodrafitrasa maoderina, azo antoka, azo andraisana sy mahazaka olona ny vehivavy sy ny ankizivavy ary hanome izany ity fotodrafitrasa vaovao ity.
Faritra midadasika iray any amin'ny sisin'i Melbourne i Stonnington, ary misy mponina 100.000 eo ho eo. Tanora ny mponina ao satria 35 taona ny salan-taona. Niha-niaingitra hatrany hatrany ilay faritra tato anatin'ny folo taona, manamboatra na manavao ny tranony ireo olona manan-katao. Maro kolontsaina ary tena mifanohitra ny fari-panànana sy ny fidirambola.
600 no isan'ny mpikambana ao amin'ny Chadstone Bowls Club, lahy sy vavy ary amin'ny salan-taona rehetra. Betsaka no efa zokiny. Nahazo ‘hita’ maherin'ny 1,3 tapitrisa ny lahatsarin'ny klioba “All the Bowling Ladies” tao amin'ny pejy Facebook Residents Against the Stadium (Mponina Manohitra Ny Fanamboarana Kianjabe) (RATS), miaraka amin'ny valiny 20.000 sy fanehoankevitra 8.500. 82 taona anankiroa sy 72 taona iray no nandihy tamin'ny Single Ladies hiran'i Beyonce nasian-dry zareo fanamboarana. Nahazo ‘hita’ 140.000 eo ho eo tao amin'ny YouTube ilay hira :
Naneho hevitra tao amin'ny Facebook i Jenny Webb :
Esorina amin'ny fiarahamonintsika ny antitra & tsy ampy hatsaram-panahy sy halemem-panahy ny olona, & ohatra tokony halain'ny tanora tàhaka amin'izay tokony hataony. Tsaroako ny fotoana nanesoran-dry zareo azy avy any St Kilda [ faritra iray hafa any amin'ny manodidina ao anatiny ]. Mbola mampisalasala ahy foana ilay hetsika.
Nanolotra fotodrafitrasa kely toy ny bozaka tsy natoraly ny filànkevitra, saingy nolavin'ny Klioba ilay tolotra, tahàka ny “famonoana miandàlana” satria mety hamono ny erana ilaina amin'ny fanangonam-bola na fifaninànana.”
Manana ny antony hankalazàna ireo hafa. Ny vondrona Facebook Build Stonnington Stadium (Atsangano ny Kianjaben'i Stonnington) (BSS) dia namaritra ilay fanapahankevitra ho toy ny ” vokatra lehibe ho an'ny fiarahamientan'ny mpitia fanatanjahantena ao Stonnington.” telo volana lasa izay, nozarain-dry zareo tao amin'ny Facebook ny lahatsariny izay manasongadina ireo mpilalao netball any an-tsekoly. Na izany aza, tsy nahatratra nny lazan'ilay fampisehoan'ireo zokiolona.
Na manana endrika hoe “tanora mifanandrina amin'ny antitra ” aza ilay fifanolanana, dia samy nandà izany fiheverana izany izy roa tonta. Ny tranga amin'ny fanorenana ny Kianjaben'i Stonnington no hazavaina amin'ireto teny ireto :
Tohananay ny fitovian'ny fidirana ao amin'ny fotodrafitrasan'ny filànkevitra ho an'ny vondron'ny fanatanjahantena rehetra. Misy 26 ny lavalava sy kianja filalaovana ho an'ny ‘cricket’, ny baolina kitra & ny rugby manerana ny Tanàna, fa toerana 2 fotsiny ny an'ny netball sy ny basketball !
Lazainy fa niangavian-dry zareo ny Filànkevitra mba tsy hanàla ny klioban'ny “bowling” fa mba te-hifampizara fotsiny. Nozarainy ity takelaka fampahafantarana ity tamin'ny volana Aogositra :
Takelaka fampahafantarana an'ny ‘Build Stonnington Stadium’ – ao amin'ny pejy Facebook-n'ny BSS
Asongadin'ny ampahan'ny valintenin'i Keith Louie ireo olana mikasika ny mahalahy na maha-vavy :
Rahoviana ny filànkevitra no hanao zavatra momba ny tsy fitoviana miharihary eto ? Misy ny fotodrafitrasa ho an'ny baolina kitra sy ny lavalava manerana ny lafivalo natao ( indrindra) ho an'ny ankizilahy.
Talohan'ny fivorian'ny filànkevitra, dia nanameloka ny fizarazaràna naterak'io sosokevitra io ny RATS :
Ohatra ny hoe namporisihan'ny fikambanan'ny Prahran Netball ny mpikambana ao aminy hanatrika ilay fivoriana rahariva miaraka amin'ny fanamian-dry zareo amin'ny netball. Azo heverina ihany koa fa hisy mpikambana avy amin'ny Klioban'ny Chadstone Bowls ao amin'ny mpanatrika izay tsy isalasalàna fa hanao ny fanamian-dry zareo amin'ny bowling. Hadisoana ho an'ny filankevitr'i Stonnington ny namorona io teodraharaha io – mampiady ny fanatanjahantena amin'ny fanatanjahantena, tarika amin'ny tarika. Tahàka ny The Hunger Games izany – izay tafavoaka velona no mahay. Mahamenatra ry filànkevitry ny tanànan'i Stonnington, mahamenatra.
Nanao fanehoankevitra tamin'ny lahatsoratry ny RATS i Fabbysabby Doodah, mpisera amin'ny Facebook , taorian'ilay fanapahankevitra :
Fahafaham-baràka izany. Aiza ireo matihanina momba ny fahasalamana ara-tsaina, ny fiahiana ny zokiolona, ny fanatanjahantena ho an'ny antitra ?
Toy ny tsy mbola vita ny ady, miaraka amin'ny tolokevitry ny lahatsarinà ‘bowl’ hafa. Nibitsika ilay karazana mpilalao ‘bowl’ hafa, ny mpilalao ‘cricket’ viktoriana Michael Beer :
To the 6 @StonningtonNews councillors who voted for the stadium to go ahead. You've got a fight on your hands! Good Luck #savechaddybowls
Ho an'ireo filànkevitra 6 @StonningtonNews izay nifidy ny handrosoan'ilay kianjabe. Eo an-tànanareo ny ady ! Mahavità soa!
Nampanantena ny hanohy ny fanentanana ireo mpanohana ny Klioban'ny Chadstone Bowls :
Mety ho tapitra io fifandirana io saingy vao manomboka ny ady. Hivondrona indray ny Residents Against the Stadium‘ ary hamerina hanomboka indray ny fanentananay manohitra ity fifidianana tsy misy dikany ity.